Kumberi: Tora Yakagovaniswa Yekutengesa Kwako Kutaurirana | Martech Zone
Mberi ndiyo chikuva chekutaurirana chevatengi chinobatanidza maemail, maapplication, uye vatambi veboka mukutarisa kumwe chete. NePamberi, zviri nyore kuti munhu wese ari mukambani yako agone kukanganisa ruzivo rwevatengi.
Kumberi kunoda kuzvifunga sekambani yekutaurisa yemapoka ekutengesa. Nenzira dzako dzese dzekusvikira dzinoonekwa kuchikwata chako chose muhwindo rimwe padivi peCRM yako uye neshure masisitimu, Mberi inokubatsira kuvhara zvimwe, nekukurumidza, ichigonesa timu yako yekutengesa:
Gadzira otomatiki mafashama nehungwaru zvinehungwaru kuronga zvinotungamira zvinotungamira, zviendese kumunhu chaiye, uye sarudza kukoshesa kufambira mberi.
Shandira pamwe pakukurukurirana mune chaiyo-nguva uye templatize ako anonyanya kushanda mameseji. Kurumidza kuenderana pazano nemamiriro azere.
Chirevo pane zvekutengesa zviitiko uye nguva yekupindura kuti uwane nzwisiso iwe yaunoda kugadzirisa. Govera varidzi kubata imwe neimwe tarisiro kubva kumagumo-kusvika-kumagumo.
Gadzira Salesforce (kana chero CRM) mubhokisi rako rezvinyorwa zvemamiriro azere pamunwe wako. Wedzera tsika kusanganiswa neFront's yakavhurika APIs.
Kumberi Kiyi Zvimiro
Chikwata Mabhokisi - Mberi inokutendera kuti utorere rako rekutengesa timu inboxes ne chiteshi, tier, jogirafi, kukurumidza - zvisinei, iwe unoronga yako tarisiro, Mberi inogona kuzviita.
Mhinduro dzakarongwa - Ramba uchiisa tsoka yako yepamberi nematemplate eemail akachengetedzeka akagadziridzwa emitengo yepamusoro yekupindura.
Yakagovaniswa zvinyorwa - Dhizaini uye gadzirisa maemail pamwe chete munguva chaiyo kuti unatsiridze kufambiswa kwako uye dzivisa kuvhiringidza kumashure-uye-mberi pane zvinyorwa.
kupindura - Kurumidza kutaurirana nechikwata chako muchirevo cheimwe neimwe email email kuti uenderane nezano rako usati wasvika.
Zorora - Ramba wakanangisa pane ako epamusoro-kukosha madhiri iwe usingatombokanda bhora pane yekutevera
CRM Kuwana - Wana CRM yako padyo padyo neshoko rega rega.
Kumbira Demo Remberi
Tags: email analyticsemail basatsananguro yeemailkumberiakagovana emailakagovana email accountyakagovaniswa inbox